घटस्थापना कुन समय र कसरी गर्ने ? यस वर्षको अति शुभ मुर्हूत यस्तो छ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
घटस्थापना कुन समय र कसरी गर्ने ? यस वर्षको अति शुभ मुर्हूत यस्तो छ
महान पर्व बडादशैंको उल्लास सुरु भइसकेको छ । यस वर्षको असोज २४ बाट नौरथा अर्थात नवरात्रि शुरु हुँदैछ । नौरथामा नौ दिनसम्म दूर्गा भवानीको पूजा उपासना गरिन्छ ।
हिन्दू धर्माबलम्बी भक्तजनहरुले यी नौ दिनमा आफ्नो घरमा घटस्थापना गरी अखण्ड ज्योति स्थापना गरेर नौ दिनको उपवास राख्छन् । यसपालि नवरात्रमा घटस्थापना एवं अखण्ड ज्योति प्रज्ज्वलनको शुभ मुहुर्त कहिले छ त ?
बिहान सवा ६ बजेदेखि सवा नौ बजेसम्म
बिहान पौने ११ देखि सवा १२ बजेसम्म
बेलुका पौने पाँचदेखि सवा ६ बजेसम्म
यस क्रममा सम्भव भएसम्म अखण्ड दीप बाल्नुहोस् । यदि बत्ति घिउमा बाल्नुभएको छ भने त्यसलाई दुर्गाको मूर्तिको दाँयातर्फ राख्नुहोस् र यदि बत्ती तेलको बाल्नुभएको छ भने त्यसलाई मूर्तिको बाँयातर्फ राख्नुहोस् । अरुको सहयोगका लागि आफुले पढिसकेपछि सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।